Ny hotely Ovolo any Aostralia sy Hong Kong dia mihinan-kena
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny hotely Ovolo any Aostralia sy Hong Kong dia mihinan-kena
Oktobra 1, 2020
Ovolo Hotels nanambara androany, tamin'ny Andro manerantany ho an'ny legioma, fa ny trano fisakafoanana rehetra sy ny fisotroana azy manerana an'i Aostralia sy Hong Kong dia handeha hihinan-kena tanteraka mandritra ny 365 andro ho avy.
Ao anatin'ny fandraisana andraikitra antsoina hoe "Ny taonan'ny legioma," dia ny toerana anaovan'ny Ovolo Australie izay tsy mihinan-kena mandritra ny herintaona dia: Monster Kitchen & Bar ao Ovolo Nishi any Canberra, izay hampiarahan'ny Chef Executive Executive, Paul Wilson ny zavatra niainany lakozia malaza iraisampirenena toa ny Copaniumagen's Geranium hamoronana menio mandroso legioma voadio; ZA ZA TA ao amin'ny Ovolo The Valley any Brisbane, notarihan'ny chef teraka Isiraeliana Roy Ner (avy any Nour sy Lilah any Sydney taloha); ary Mister Percy ao amin'ny Ovolo 1888 Darling Harbour any Sydney, izay hivadika ho fisotro misy divay italianina tsy mihinan-kena. Ao amin'ny Ovolo Woolloomooloo, Aostralia ary trano fisakafoanana hotely vegan voalohany any Alibi Bar & Kitchen dia hanohy ny fiaraha-miasa amin'ny mpisava lalana manerantany, Matthew Kenney, ho mpiara-miasa Creative Culinary.
Tao Ovolo any Hong Kong dia natomboka tao Veda tao Ovolo Central, trano fisakafoanana hotely voalohany an'ny Hong Kong ny hetsika mankany vegetarianism. Ankehitriny, Komune, ny toeram-pisakafoanana tontolo andro any Ovolo Southside, dia manapaka hena amin'ny menus, ary ny hotely atsy ho atsy dia hanomboka ny foto-pisakafoanana fisakafoanana vaovao izay ho lasa tsy mihinan-kena ihany koa.
Ny mpanorina sy CEO an'ny Ovolo, Girish Jhunjhnuwala, dia nilaza fa: "Ny fisakafoanana any ivelany sy ny fihinanana sakafo matsiro sy divay miaraka amina orinasa lehibe dia iray amin'ireo fahafinaretana tsotra indrindra amin'ny fiainana. Fotoana tsara sy fikasana tsara no fomba fivoarantsika. Tianay ny hahatsapa izay laninay ary hampihatra ny faharetan'ny tontolo iainana araka izay tratranay, satria mitarika fiatraikany lehibe kokoa amin'ny zanak'olombelona izany, fa tsy ny tontolo iainana ihany. "
Nanolo-tena hitady fomba hanenanana bebe kokoa ny dian-tongotry ny tontolo iainana izy, ny fivezivezin'i Ovolo mankany amin'ny trano fisakafoanana mihinana zava-maniry sy ny “fihinanan-tena” manaraka ny fandraisana andraikitra ara-tontolo iainana hafa efa napetraky ny fanangonana hotely tamin'ny taona lasa. Anisan'izany ny fanafoanana ny kojakoja fandroana plastika tokana ampiasaina ary ny fampiasana tavoahangy paompy azo fenoina tsy azo ovaina izay azo averina HDPE. Ho fanampin'izany, Ovolo dia nanala ny mololo plastika tokana nampiasaina, nanolotra kitapo tenona azo ampiasaina indray ho an'ny kapaoty, ary nifindra hampiasa fitaovana biodegradable amin'ny kitapo fanasan-damba sy fonosana manerana ny fananana rehetra ao amin'ny portfolio-ny.
Ilaina ara-bola ilaina eo amin'ny fiainanao
Etiopia Airlines dia nanambara ny fiantohana fiantohana COVID-19 manerantany